Sida loo qorsheeyo shabakadahaaga bulshada | Abuurista khadka tooska ah
Beatrice Hernani | | Khayraadka, dhowr
Markii aan bilaabay shirkadayda waxaan la kulmay dhibaato weyn, shabakadaha bulshada ee caanka ah. Sababta Sababtoo ah waxaan waayey saacado maalintii si aan ugu huro dhammaan waqtiga ay mudan yihiin.
Mawduucani macno ahaan wuu i waalay. Sababtoo ah maahan oo keliya inaan daryeelo shabakadaha bulshada, laakiin waa inaan ka shaqeeyaa shirkaddayda iyo sidoo kale dhammaan waraaqaha ay u baahan tahay in la qabto. Waqti yar gudahood, mowduucan wuxuu igu noqday xanuun. Tanina aniga kuma dhici karin aniga, maxaa yeelay isaguShabakadaha bulshada waa mid ka mid ah bandhigyada shirkaddaada ee adduunka ka baxsan.
Marka waxaan qaatay go’aan qorshee shabakadahayga bulshada bil kasta, waana inaan kuu sheegaa in tartiib tartiib mushkiladda la xalliyey waxaan ku guuleystey inaan dhibaatadayda u beddelo madadaalo oo aysan ku lug lahayn dadaal iyo walaac weyn
Sideen ku sameeyaa? Hadda waxaan kuu sheegayaa.
Ujeeddooyinka. Kahor intaanan bilaabin calaamadeynta yoolalka la qabanayo inta lagu jiro bisha.
Waxaan bartaa maalmaha. Waxaan fiiriyaa jadwalka maalmaha la iftiimiyay si aan u sameeyo daabacaad aan u arko inay aad u sarreyso. Tusaale ahaan, ciid, maalinta caalamiga ah ee wax, iwm. Marka waxaan abuuraa waxyaabo xiiso leh oo iga caawin kara la falgalka bulshadayda.
Ka fikir suurtagal wadashaqeynta bisha. Tusaale ahaan, haddii aad tahay shirkad u heellan qalabka, waxaad la xiriiri kartaa saamile wax wada qabsi ama shirkad dhar si aad u sameysid kulan sawir wada shaqeyn ah.
Istaag #staagyada aan isticmaali doono. Tanina waa muhiim maxaa yeelay waxay naga caawin doontaa inaan nafsadeena ka dhigno oo aan balaarino. Mid cusub bil kasta si loo gaadho bulshooyinka kale.
Ka fikir macquul tartamada, caqabadaha ama mowduucyada bisha.
Marwalba waan qoraa xogta bishii hore waxaan sameeyaa a barashada daabacaadda ugu caansan ee la isku dayo in la raaco khadkaas.
Ka fikir in waxa aad baraysaa ay tahay shaqadaada, markaa si fiican u shaqee oo waad arki doontaa sida aad u guuleysato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Sida loo qorsheeyo shabakadahaaga bulshada
Muuqaalka quruxda badan ee Camille Corot